Bhatiri bvunzo pakati peIOS 14.6 uye iOS 15 beta 1 | IPhone nhau
Vazhinji ndivo vashandisi avo mushure mekuisa yazvino vhezheni iriko iripo yeIOS 14, iOS 14.6, vanosimbisa kuti hupenyu hwebhatiri remidziyo yavo yakaderedzwa zvakanyanya, kunyangwe riini ivo havasi kushandisa iyo terminal, dambudziko iro sezviri pachena Apple risingazive kubva mazuva mashoma apfuura akamira kusaina iOS 14.5.1.
Nekuda kwematambudziko aya nehupenyu hwebhatiri, vazhinji ndivo vashandisi vari kufunga nezve kuisa yekutanga beta iOS 15, kutarisa kana matambudziko ebhatiri akagadziriswa, kunyangwe iri beta uye parizvino mune yekutanga beta. Vakomana paAppleBytes vakatiitira bvunzo iyi.
Ivo vakomana veAppleBytes vaita bvunzo pane iyo iPhone 6s, iPhone 7 uye iPhone SE 2020 mamodheru kuti zvionekwe. Nehurombo, mhinduro kumubvunzo uyu kwete. Hupenyu hwebhatiri hwezvinhu zvese zviri zviviri hunoramba hwakafanana pazvinhu zvese.
iFoni 6s ine iOS 14.6: 1 awa nemaminitsi 49. 100% yakakwira bhatiri kugona. Gloss mwero pa25%.
iPhone 6s ine iOS 15: 1 awa nemaminitsi makumi mashanu nemashanu. 53% yakakwira bhatiri kugona. Gloss mwero pa100%.
iPhone 7 ine iOS 14.6: 3 maawa nemaminitsi makumi maviri nemasere. 28% yakakwira bhatiri kugona. Gloss mwero pa100%.
iPhone 7 ine iOS 15: 3 maawa nemaminitsi makumi maviri nemasere. 38% yakakwira bhatiri kugona. Gloss mwero pa100%.
iPhone SE 2020 ine iOS 14.6: 3 maawa nemaminitsi makumi mana nemaviri. 42% yakanyanya huwandu hwebhatiri. Gloss mwero pa91%.
iPhone SE 2020 ine iOS 15: 3 maawa nemaminitsi makumi mana. 41% yakanyanya huwandu hwebhatiri. Gloss mwero pa91%.
Nekuvhurwa kweIOS 15, vhezheni yatichakwanisa kuisa pane iyo iPhone 6s uye iPad Air 2, vazhinji ndivo vashandisi vasina kugutsikana kuita iyo yekuvandudza, nekuti inogona kuve coup de nyasha kune iyo terminal. Zvisinei, zvinoita sekudaro Apple yakashanda kuitira kuti izvi zvisaitike sezvataigona kuona mukati bvunzo iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Bhatiri bvunzo pakati peIOS 14.6 uye iOS 15 beta 1
iOS 15 inobvumidza vashandisi kukumbira kudzoreredzwa kwe-in-app kutenga mune maapp